Ahịa Email site Ọnụ Ọgụgụ | Martech Zone
Ezi enyi m, Chris Baggott, na-achọ ịhapụ akwụkwọ mbụ ya, Email Marketing Site na Ọnụ Ọgụgụ. Chris dere akwụkwọ ahụ Ali Ahịa, enyi m ọzọ.
Chris bụ onye otu ntọala Kpọmkwem Ngwaọrụ, ụlọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa. Blog nke Chris (ya na ndi isi na ndi oru ozo di ebube) etinyela ExactTarget n'ime uzo - akpọ aha otu ụlọ ọrụ 500 na-eto eto na mba ahụ.
Ọ bụghị naanị na enwere m obi ụtọ iso Chris na-arụ ọrụ na ExactTarget, m na-ekwupụtakwa na akwụkwọ ya - na-ekwu maka akpaaka na mwekota. Ana m atụ anya ịgụ akwụkwọ a yana oke ọ ofụ nke ịhụ onwe m n'akwụkwọ! Edeela m ma na-aga na magazin, mana anaghị m akwụkwọ. N'ezie ọ kpaliri m ịmalite ide onwe m, enwere m ihe dị ka peeji 75 na ihe m mụtara na afọ mbụ nke ịde blọgụ. Achọrọ m ịlaghachi na ya!
Chris amalitekwala ụlọ ọrụ ya ọzọ, Compendium sọftụwia. Enweela m obi ụtọ iso Chris rụọ ọrụ na mbido a - anyị nọrọ ọtụtụ mgbede na-ekwu okwu banyere mgbagwoju anya nke ịmegharị ihe ntanetị na enweghị ike nke ndị na-agụ ya enweghị ike ịchọta ọdịnaya dị mfe. Ga-ahụ Compendium na maapụ na-eme nke ahụ! Achọghị m ka m hapụ ọtụtụ ihe na akpa dị na ya, mana enwere m obi ụtọ ịhụ ọhụụ Chris bịara na eziokwu dịka Kpọmkwem Ngwaọrụ mere. Chris na-arụ ọrụ na Compendium oge niile. Enwere m nwa nwoke na-aga kọleji, n'ihi ya, m ga-ahọrọ ụzọ dị mma ma soro ụlọ ọrụ na-agbawa ugbua!
Kwadebe iwu nke Email Marketing site na Ọnụ Ọgụgụ! Email bụ ka ihe ịrịba technology na tọn ndị ọzọ nkwa. N'adịghị ka teknụzụ ọ bụla ọzọ, ozi-e dabere na ikike ka na-ebute ụzọ n'ahịa 'push'. Nke ahụ bụ, ị nyere m ikike ka mụ na gị kparịta ụka, ma enwere m ike ịkwanye gị ịgwa gị okwu mgbe achọrọ m. Television, Radio, Akwụkwọ akụkọ, RSS ka nwere nkwenye siri ike na onye ahịa, onye ahịa ma ọ bụ atụmanya 'itinye na'. Email abụrụla akụkụ nke ndụ anyị kwa ụbọchị (amaghị m ihe m mere tupu email!) Ma ga-aga n'ihu n'ihu n'ụzọ ahụ.
Enweghị m ike ichere inweta otu akwụkwọ ahụ! Ma ọ ka mma ịmegharị, Chris!
Tags: chris akpaemail Marketingakwụkwọ ahịa emailemail ahịa site na nọmba
SOAP'd: Hazie Otu Mmemme ọzọ
Achọtara m saịtị gị site na ịchọ akwụkwọ a; ) Ọ dị ka ọ nwere ike ịlele.
A na m atụ anya! Chris bu ezigbo mmadu ma buru kwa onye nkwusa ozioma nke na-eme ike Email n’uwa nile n’ime afo 5 gara aga. Ndụmọdụ ya pụtara ìhè ma gbasoo n’ihu. Email na-ele anya dị ka “ụnyaahụ” nkà na ụzụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ma. Ndị na-ere ahịa na-achọta njikọta ozi-e, ibe ọdịda, nke ezigara na-ezigara, wdg. Na-eme ka okporo ụzọ na ego na-abanye na saịtị ha.
Ekwenye. Echefula ike nke email echekwara nke ọma na ọnụọgụ abụọ na ndepụta ndị debanyere aha.
Apr 27, 2007 na 8: 49 AM
Ọ bụ oké akwụkwọ na uzu amalitela na ya gburugburu anyị gburugburu na Atlanta. Doug, ọ dị mma ịchọta blọọgụ gị na ọchịchọ kacha mma nye gị, Chris na ndị isi echiche na Exact Target na Compendium. Laa azụ Atlanta na nwere a ibe anụ m mgbe ụfọdụ! Scott
Apr 27, 2007 na 9: 20 AM
Ọ dị mma ịnụ n'ọnụ gị ma nwee obi ụtọ na ị chọtara m! Enwere m atụ anya ịhụ gị ọzọ n'oge na-adịghị anya.
Maka ndị na-amaghị: Nkọwa 6 bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ nke leverage technology na Marketing. Y'oburu na enwere otu ulo oru m na aru oru na nghota mgbasa ozi a na-achota, akụrụngwa, yana ikike iwepụta ikike nke ọ bụla, ọ bụ Definition6.
Scott na otu ndị otu echiche zuru oke na ụlọ ọrụ ahụ. Enwere m obi ụtọ iso Michael Kogon (CEO) na Scott rie nri abalị n'otu abalị ma ọ bụ ume nke ikuku ọhụrụ. M gbagara Atlanta na a uzu, ndụ na echiche na obi ụtọ na-azụ ka mma anyị ngwaahịa.
Microsoft amatala Definition6 ugboro ugboro maka nka na nka ha. Ọ bụ ihe ịrịba otu! Mgbe anyị lere anya na 'Agency of the Future', echere m na Definition6 abụrụla ezigbo ihe atụ!
Daalụ maka ịkwụsị site na ime ka m mara na ị nọ ebe a, Scott!